hundeeffama - Seensa - Information Network Security Agency
Bara infoormeeshinii fi addunyaawummaa keessa jiruuti erga infoormeeshiniin humna murteessaa biyyi tokko ittiin dorgomtuu ta'ee bubuleera. Infoormeeshiniin kuttaa kamiyyu keessatti gumaacha murteessaa ta'aa dhufeera; jiruu keenya dhuunfaa irraa kaasee sochiin guyya hundaa dhaabilee mootummaa fi mit-mootummaa infoormeeshinii wajjiin baay'ee kan walqabatee dha. Infoormeeshiniin jiruu hawaassummaa fi siyaasaa keessatti keessattuu immoo gama kuttaa dinagdeetiin shoori taphataa jiruun humna fi qabeenya murteessaa ta'ee akka laaka'amu isa dandeesiiseera. Infoormeeshiniin guddina dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa biyya tokkoo keessatti shoora murteessaa taphachuu kan danda'u nageenyi isaa mirkanaa'ee kaayyoo barbaadamuuf qofa yoo oolu ta'uun isaa ifa; faallaa kanaan infoormeeshiniin nageenyi isaa yoo hin mirkanoofne humnaa fi qabeenya ta'uu irra carraan dalagaawwan gufuu misoomaa fi fara dimookraassumaa ta'aniif ooluu isaa bal'aa dha. Kana waan ta'eef biyyoonni shoora murteessaa infoormeeshinii hubachuudhaan nageenya isaatiif xiyyeeffannaa addaa kennuun socho'uu erga jalqabanii bubulaniiru. Nageenya infoormeeshinii yoo jedhamu icciittummaa, guutuummaa fi irra gahummaa infoormeeshinii mirkanneessu jechuu dha.
Biyyatti teenya Itiyoophiyaa keessatiis qabeenya murteessaa ta'uun infoormeeshinii dursa hubachuudhaan nageenya isaatiif; walumaagalatis nageenya diree saayberii infoormeeshiniin keessatti kuufamu, xinxalamuu fi itti tamsa'uuf xiyyeeffannoo addaa keennitee socho'uu irratti argamti. Kanas akka ka'uumsaati fudhachuudhaan saayberii feedhiiwwan fi falaasamoota biyyaaleessaa biro wajjiin akka adeemu kaayyoo jedhuu keettee hojjachaa argamti. Kunis saayberiin sagantaawwan misoomaa, deemookraasii fi nagaa biyyatiin qabattee kan saffisuu akka ta'uu gochuu dha.
Eejensiin nageenya saaphanna infoormeeshinii fedhii murteessaa biyyaaleessaa kana irratti hundaa'uudhaan dandeetii sadarkaa addunyaatti isa dorgoomsiisu kan qabuu fi mul'ata humna saayberii haroomsa biyyattii keessatti shoora murteessaa taphatu ijaaruu kaa'ee hojjachuu irratti argama.
Eejensiin nageenya saaphanna infoormeeshinii yeroo jalqabaatiif bara 1999 bu'uura danbii mana maree ministeerootaa lakk 130/1999tiin hundeeffame. Haa ta'u malee yakka saayberii yeroo dhaa yerootti xaxxamaa dhufe ittisuu fi faayyidaawwan biyyooleessaa eegsiisuuf hujjiiwwan fi ittigaafatamummaa ejensiichaa irra deebi'uudhaan fooyyeessun waan barbaachiseef danbii mana mare ministeerootaa lakk 250/2003 akkasumas irra deebii bara 2006 labsii lakk 808/2006 tiin hujjiiwwan fi itti gaafatamoonni ejensiichaa fooyya'anii akka haarawaati hundeeffamuu danda'eera.